Semalt: Nzira Yakanakisisa Yokumisa Pop-Up Ads
Google inoita basa guru rekuchengetedza mawindo ep-up ari pasi pekutonga. Ndicho chikonzero nei mawindo emafesti ekuputika anowedzera maitiro edu ekutsvaga anoratidza mamwe matambudziko makuru. Ndinofara, pane nzira dzakawanda dzekutarisana nezvipikiso izvi zvinovhiringidza uye zvinotsamwisa. Kubvisa zvisingabvumirwi uye zvisingazivikanwi uye zvinoshandiswa mubhanhire ndiyo nzira mbiri. Chokutanga, unofanira kubvisa chero adware kana malware kubva mumashini yako. Chechipiri, iwe unofanirwa kushandisa shanduro yekutsvaga kuti uvhare map-ups uye zvikwata zvemabhendi. Zvimwe zvinhu zvaunofanirwa kuzvichengeta mupfungwa zvinotaurwa pasi apa.
Kuchenesa mawindo ako:
Lisa Mitchell, uyo Semalt nyanzvi, anotsanangura kuti kana iwe uchitanga chirongwa cheAVG anti-virus uye wakamira kushanda zvakanaka, unofanira kutarisa imwe yeadware kana anti-malware. Nyanzvi dzakawanda dzinokurudzira Malwarebytes Anti-Malware, iyo yakanaka pakurwisa malware uye kubvisa zvinoshungurudza pop-up ads kubva pane yako. Chimwe chirongwa chakafanana iwe unogona kuedza zvose Windows 7 neWindows 8 ndeye Xplode's AdwCleaner, iyo inofungidzira zvese izvo zvigadzirwa, vashandisi vevashandisi, uye adware inoita kuti vanhu vakawanda vape. Pane chirevo chenhema uye chepamutemo cheAdwCleaner chichakukumbira kuti ubhadhe chimwe chinhu pakubvisa pop-ups uye adware. Iwe haufaniri kusarudza iyo uye kuikora chete iyo yechokwadi yeiyo yezvigadzirwa..
Kuongorora zvinyorwa uye kuwedzera pane Windows 7 neWindows 8, unofanira kufanidza paikoni padivi repamusoro uye chengetera pane Zvichawedzerwa pane imwe nzvimbo kubva pasi. Zvose zvinowedzera-zvine mabheji akasiyana-siyana ekudzivirira, Bvisa uye Zvimwe nzvimbo. Iwe unongotanga kuvhara paBhokisi reDhivharivha uye simira malware uye zvinoshungurudza matanho ep-up kubva pakuratidza mudhidhi yako yekushanda. Imwe nzira yekuderedza nhamba yepad-up ads muWindows 7 uye Windows 8 ndeyokuisa Ublock Origin software. Purogiramu yacho yakataurwa naRaymond Hill uye inogona kudya zvakasiyana-siyana zve malware uye adware zvichikonzera pop-ups. Inouya nemafuta maduku akadai seAlexPrivacy uye EasyList. Iwe unogonawo kusarudza Ghostery, iyo ndiyo yakanakisisa uye inoyevedza chigadziro kudzivirira pop-up ads. Iyo inogona kudzivisa mapeji epa Facebook, DoubleClick matangazo, uye zvivako zveGoogle Translate zvakare.
Pop-ups nyore nyore kurwisa mawebhusayithi nemaitiro ekushandisa waunoshandisa kukurudzira michina yakawanda paIndaneti uye kuita mari. Inonzi foistware, inosanganisira mapurisa akaita seGoogle, Microsoft Bing, Ask, PUPs uye Google Chrome. Chinhu chinonyanya kusarudzwa ndechekuti iwe unoisa purogiramu inozivikanwa seUnchecky. Iyo inodzima kana kubvisa zvimedu zvezvipo zvinotaridzika zvakakodzera uye zvinoonekwa nenzira yep-ups.
Ita kuti Windows 10 iwedzere mberi:
Microsoft inoedza kuwana iyo yeWindows 10 yehutachiona yehutachiona pane zvigadziri zvakasiyana siyana uye yakagadzirisa GWX (Get Windows 10) zvishandiso paWindows 7 neWindows 8. Inokukumbira kuti uvandudze pasina, izvo zvausingafaniri. Tinokukurudzira iwe Wekupedzisira Outsider's GWX Control Panel kana iwe uchida kudzivisa mazaziso eMicrosoft ekupikisa uye zvinotyisa zvinotyisa. Zvichida, iwe unogona kuedza Ed Bott ad blocker uye kubvisa zviratidzo zvepap-ups nemabhanner zvinokurudzira iwe paIndaneti Source .